Wool polyester lamba
Afaka mahazo ny santionany ny boky?
Faly handefa mitovy na mitovitovy santionany an-tanana ho an'ny mpanjifa free.New mila mandoa saram Express, dia refund toerana rehefa fotoam-pitsarana ny didy; raha tsy maintsy mitovy santionany araka ny yourrequired, mila mandoa ny anjara-raharaha santionany, raha toerana baiko ny ampahany famokarana, dia refund Izao didy izao.
Mandra-pahoviana ny fananako ho vonona ho amin'ny fandefasana?
Tsy mitovy ny lamba famaritana mahazatra deliver.As Tsy mitovy, ny asa 15-25 andro.
Ahoana no momba ny MOQ?
Indrindra indrindra ho an'ny lamba 2000m. (Afa-tsy ny manokana ny lamba fepetra arahana)
Ahoana no ahafahako mahazo ela ny vidiny notsongaina?
Ho avy hatrany mitanisa ianao, raha mifidy ny zavatra, dia nanonona ny vidiny ao anatin'ny iray andro fiasana araka ny fepetra.
T / T na ny L / C amin'ny fahitana.
Ahoana ny fonosana?
Fa lamba: horonan-taratasy iray tamin'ny polybag iray, ary ny rakotra fanaovam-panavotana ivelan'ny Bag ny PP. Koa couldaccording ny requirement.For fanamiana, iray ny andro iray polybag, ary isaky ny 20 milentika feno tamin'ny baoritra iray. Kosa mba mahazo araka ny fepetra.
Ahoana no mba hahazo antoka ny toetra alohan'ny filaminana?
Mety handefa anareo tsy ho andevo santionany izay misy noho ny fanamarinana. Na fandefasana ny santionany ho anay izao, dia ho ny mifanohitra santionany noho ny fankatoavana eo anoloan'ny filaminana.
Ahoana no hamahana ny olana taorian'ny toetra varotra?
(1) maka sary ny olana ka maniraha antsika.
(2) Raiso lahatsary ny olana ka maniraha antsika.
(3) alefaso ny olana ara-batana lamba amin'ny Express ny us.After dia manamafy ny olana, toy ny vokatry ny milina, Fandokoana na ny fanontam-pirinty, sns, Ao anatin'ny telo andro, dia hotarihintsika ny fandaharana afa-po ho anao.
Inona no fitaovana ny camouflage fitoriana natao ...